Mpamatsy borosy vita amin'ny makiazy sy mpanamboatra orinasa vita amin'ny borosy vita amin'ny makiazy
Ambongadiny 12PCS Rose Gold NK3 makiazy borosy napetraka tarehy tarehy eyeshadow eyeliner molotra borosy set fitaovana amin'ny vy boaty
Overview Quick Details Brush material: Fibre synthetika Toerana niandohany: Zhejiang China Model Number: BRS012NK Fampiasana: tarehy ampiasaina miaraka amin'ny: Lip Liner, CONCEALER, Brush shave, BLUSHER, FOUNDATION, Item an'ny aloky ny maso isaky ny set: 12PCS / Set handle material: Eco- Sariaka hosodoko vita amin'ny hazo Hafa fitaovana hafa azo namboarina araka ny takian'ny mpanjifa Style: Angular Blush ...
Natao hampiasaina an-trano sy ho an'ny matihanina! Ny fonosana borosy dia misy endrika sy habe samihafa handrakofana anao mila manao makiazy amin'ny faritra samihafa amin'ny tarehy ary mifanaraka amin'ny endrika endrika tsirairay. Ny borosy maso vita amin'ny akora fibre synthetic premium misy tahony hazo dia manome fikitihana sy fahatsapana tsy mampino. Ity borosy mason'ny masom-borona ity dia mety indrindra amin'ny ranon-javatra, vovoka na menaka fanosotra mba hamoronana fampiharana makiazy maso sy tarehy tsara tarehy. Manarona ny habe sy ny endrika borosy rehetra hamoronana karazana ...
Muran ambongadiny 10 pcs avo lenta spiral tantely unicorn andiana borosy makiazy miloko miloko Spiral Unicorn makiazy napetraka Set
Fanangonana matihanina Ny borosy makiazy dia mety amin'ny fametahana vokatra kosmetika ranon-javatra, vovoka na fanosotra, izay mahavariana anao isaky ny misy fotoana nefa tsy misy fako sy famafazana borosy. Ny volom-borona matanjaka sy mateza azo antoka ary maharitra dia malefaka sy malefaka ary miaro ny hoditrao. Fanampin'izay, ny borosy dia manome famaranana tsy misy kilema sy seamless isaky ny avy, manome fahombiazana maharitra. Fitaovana fanamafisana: volo sentetika malefaka sy matevina ary malefaka: tsy misy habibiana 100%. ...
12Pcs Portable Travel Kitapo hazo Rose Pink Blush Powder Make Up Brushes Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set
Anaran'ny vokatra 12Pcs Portable Travel Wooden handle Rose Pink Blush Powder Make Up Brushes Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set Material Hair synthetic + Wooden handle + aluminium ferrule Item no .: brs0PK012WD Color Customized Size 24 * 12 * 2cm Weight 195g Logo Customized Package 1set in a pu kitapo, ary avy eo 200sets amin'ny baoritra santionany fotoana 5-7andro, namboarina manokana 15-20 andro fotoana famokarana Miankina amin'ny habetsanao, latsaky ny 2000sets mila 15-20days, mihoatra ny 2000sets ...
2020 borosy vita amin'ny kosmetika vita amin'ny hazo avo lenta 14cm borosy makiazy vita amin'ny borosy vita amin'ny borosy vita amin'ny makiazy manokana
●14-PIECE BRUSH COLLECTION: Sarony daholo izay ilainao amin'ny Makeup rehetra anao. Ny fampiasana borosy mifangaro BS-MALL, borosy volomaso, borosy eyeshadow sns dia afaka manome valiny mitovy amin'ny makiazy napetraky ny artista makiazy matihanina!
● Mifanentana isaky ny tarehy: ny borosy makiazy amin'ny maso dia misy endrika sy habe isan-karazany, noho izany dia mety amin'ny fametahana sy fanasongadinana ny endrika endrika tsirairay.
● Boribory tsy misy legioma sy lozabe: vita amin'ny volon'ondry malefaka malefaka sy landy ny volon-tratra, miantoka ny fampiasana maharitra. Ny borosy makiazy rehetra dia tsara sy matevina, mety na dia ny hoditra marefo indrindra aza. Miaraka amin'ny herin'ny hery mitazona lehibeder, ny borosy dia ho mpanampy tsara hamoronana endrika tsy misy kilema.
Wholesale Beauty Tools 7 PCS Quicksand Brush Sets Miaraka amin'ny diamondra vita amin'ny borosy vita amin'ny diamondra
[BRISTLES DONSE SOFT]: ny borosy makiazy dia vita amin'ny kofehy sentetika avo lenta, manome anao fahatsapana fikitika malefaka sy milamina, tsy misy ratra amin'ny hoditra, mety ho an'ny hoditra mora tohina indrindra ary tsara ho an'ny karazana ranoka na fanosotra fanosotra.
[TSY MISY FIVORIANA]: Vita amin'ny firavaka avo lenta, fitaovana plastika ary sentetika matevina, tsy misy ratra manelingelina ny tavanao mandritra ny fizotran'ny fampiharana makiazy.
[BRUSHES VARIETY LEHIBE]: Miaraka amin'ireo Sintom-bolo Foundation Powder Concealers Eye Shadows Makeup Brush Sets miorina amin'ny multifunctional, apetaho tsy misy fangarony ary afangaroy ny vovoka, fanamafisam-peo, fanafenana, aloka, lamba firakotra, sy maro hafa. Natao ho an'ny vao manomboka sy ny mpankafy makiazy.
Rose Gold Glitter Handle 10cm kristaly borosy fototra napetraka miaraka amin'ny borosy makiazy kitapo pu
Ny fonosana borosy dia misy endrika sy habe samihafa handrakofana anao mila manao makiazy amin'ny faritra samihafa amin'ny tarehy ary mifanaraka amin'ny endrika endrika tsirairay.
Ny borosy maso vita amin'ny akora fibre synthetic premium misy tahony hazo dia manome fikitihana sy fahatsapana tsy mampino.
Ity borosy mason'ny masom-borona ity dia mety indrindra amin'ny ranon-javatra, vovoka na menaka fanosotra mba hamoronana fampiharana makiazy maso sy tarehy tsara tarehy.
Mandrakotra ny habe sy ny endrika borosy rehetra mba hamoronana makiazy tarehy isan-karazany, ny borosy tsy manam-paharoa dia afaka mifanaraka amin'ny ilainao rehetra, mampiseho ny hatsaranao voajanahary ary mamela makiazy tsy misy kilema.
Ny tahon'ny borosy makiazy dia vita amin'ny firavaka avo lenta sy fitaovana vita amin'ny hazo. Mora raisina sy maharitra amin'ny fampiasana ela.
Ny volon'ny kitapo borosy makiazy dia vita tsara amin'ny fibres synthetic maharitra - nylon malefaka sy landy. Tsy misy habibiana sy sariaka amin'ny hoditra